Ahoana ny fomba hividianana toerana bebe kokoa amin'ny iCloud amin'ny iPhone na iPad | Vaovao IPhone
Ahoana ny fomba hikirakirana ny habaka bebe kokoa amin'ny iCloud amin'ny iPhone na iPad
Ruben gallardo | | iCloud, Fampianarana sy torolàlana
iCloud dia nanjary "tsy maintsy misy" mba hanananao ny angon-drakitra rehetra amin'ny solo-sainao Apple soa aman-tsara. Ary, ambonin'izany rehetra izany, misy na aiza na aiza. Azonao atao koa ny manomboka miasa miaraka amina antontan-taratasy amin'ny iPhone, ohatra, ary mamita amin'ny iPad. Na izany aza, angamba tsy ampy ny habaka malalaka omen'ny Apple anao amin'ny alàlan'ny iCloud. Ary izany no antony hampianarinay anao ny fomba hanofana habaka bebe kokoa amin'ny iCloud avy amin'ny iPhone na iPad.
Araka ny fantatrao tsara, Apple dia manome anao toerana malalaka 5 GB ao amin'ny iCloud hahafahanao mitahiry ireo rakitrao ary asio azy ireo na aiza na aiza (iPhone, iPad, Mac, avy amin'ny Internet, na avy amin'ny solosaina aza Windows). Na izany aza, raha iray amin'ireo mitahiry sary, horonan-tsary na miasa amina antontan-taratasy tsy misy fetra (PDF lehibe ohatra) ianao dia azo antoka fa mila toerana bebe kokoa ao amin'ny iCloud ianao. Y avy amin'ny fitaovana iOS mihitsy no ahafahanao manakarama azy.
1 4 solon'izay iCloud hanakarama
2 Dingana hananganana habaka bebe kokoa amin'ny iCloud avy amin'ny fitaovan'ny iOS
3 Fanavaozana mandeha ho azy sy fanafoanana tsy misy sazy
4 solon'izay iCloud hanakarama
Ao amin'ny iCloud dia manana safidy fitahirizana 4 misy izahay. Ny rohy voalohany dia ny 5 GB maimaim-poana - hanana izany ny rehetra. Avy eo dia hanohy hiakatra isika 50GB, 200GB, na 2TB. Miankina amin'ny zavatra ilaintsika sy ny zavatra andoavantsika isam-bolana ny zava-drehetra. Ny marina dia ny fampitomboana ny habaka dia tsy lafo loatra. Hanomboka amin'ny 0,99 euro isam-bolana izahay ho an'ny drafitra 50 GB. Saingy avelanay anao ny antsipiriany etsy ambany:
50 GB: 0,99 euro isam-bolana
200 GB: 2,99 euro isam-bolana
TB 2: 9,99 euro isam-bolana
Etsy ankilany, ampahatsiahivo anao fa ny sasany ireo drafitra ireo dia azo zaraina amin'ny fianakaviana. Na izany aza, io fahafaha-manao io dia tsy mitondra afa-tsy amin'ny safidy 200 GB sy habaka 2 TB; ny drafitra 50GB dia olona tokana. Izany dia hoe, ndao hojerentsika ny fomba hanakarama toerana bebe kokoa na hanovana drafitra avy amin'ny iPhone na iPad.
Dingana hananganana habaka bebe kokoa amin'ny iCloud avy amin'ny fitaovan'ny iOS
Ny zavatra voalohany tokony hananantsika dia Apple ID miasa izay ananantsika. Aza hadino koa ny manavao ny angon-drakitrao, indrindra ireo izay miresaka ny fandoavana; Ampidiro ny antsipiriany momba ny carte de crédit na debit. Izany dia milaza fa mankany amin'ny «Fikirakira» ny iPhone na iPad ary Ny fizarana voalohany izay miseho dia ilay manondro ireo angon-tsainay manokana sy ireo izay voasoratra anarana ho an'ny kaontin'i Apple (Apple ID). Tsindrio ity fizarana ity.
Raha vantany vao ao anatiny dia hanana faritra samihafa isika. Ohatra, hanana ilay iray izay manana isika miresaka momba ny anarana feno, ny adiresy ary ny nomeraon-telefaoninay. Etsy ankilany, hanana ny fitantanana ny tenimiafintsika izahay, ary koa ny angona momba ny carte de crédit voasoratra anarana. Ho fanampin'izay, eto no toerana ahitantsika ny solosaina iza no mampiasa ny Apple ID amin'izao fotoana izao. Ary amin'ny fomba ahafahantsika manadio tanteraka.
Raha manohy eto ambany isika dia hanana ilay faritra mahaliana antsika: izany dia ilay manondro ny "iCloud". Ny fidirana ao dia hanana antsipiriany momba ny habaka ampiasainay avy amin'ny kaonty iCloud anay sy ny habaka sisa tavela ao aminay. Ho fanampin'izay, hiseho ny lisitry ny fampiharana feno izay mampiasa ny serivisy apetraka rahona an'ny Apple. Io ihany koa no toerana hanomezanao alàlana - na tsia - hampiasain'ireto fampiharana ireto fampahalalana ao amin'ny iCloud.
Saingy tsy hahaliana ny fizarana izay milaza hoe "Tantano fitehirizana". Raha vantany vao ao anatiny dia hanana antsipiriany momba ny inona no ampiasain'ny fampiharana tsirairay izay mampiasa iCloud ao amin'ny habaka nifanarahana. Ho fanampin'izay, eo ambanin'ny tsipika fisehanana dia hanana ilay tranonkala notadiavinay hatramin'ny fotoana voalohany izahay: «Hanova drafitra». Ankoatr'izay, alohan'ny tsindrio azy dia lazao amintsika izay maody ampiasaintsika amin'izao fotoana marina izao. Ampidirinay ity fizarana ity ary hiseho ireo fomba maodely samihafa azonay ifanarahana. Tsy mila misafidy ny drafitra mifanaraka amin'ny filantsika fotsiny isika izao ary manaiky ny fanovana.
Fanavaozana mandeha ho azy sy fanafoanana tsy misy sazy
Rehefa vita ny fanovana dia ampahatsiahivo anao fa amin'ny ny vidin'ny drafitra dia misy ny VAT. Ho fanampin'izay, havaozina ho azy isam-bolana izy io ary azonao atao ny manafoana azy io isaky ny maniry ianao nefa tsy matahotra ny handoa na inona na inona. Mazava ho azy, raha mila toerana kely ianao amin'ny fotoana rehetra, dia mitandrema amin'izay rehetra notehirizinao tao amin'ny iCloud ary mety ho very ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Ahoana ny fomba hikirakirana ny habaka bebe kokoa amin'ny iCloud amin'ny iPhone na iPad
Tetika efatra hanatsarana ny fanekena ny tarehy na ny ID amin'ny tarehy
"Vohay indray mipy maso" ilay horonantsary fampiroboroboana vaovao ho an'ny iPhone X